Calool: Abaabulka Hal-abuurka | Martech Zone
Canbaareynta: Abaabulka Hal-abuurka
Isniintii, September 16, 2013 Isniintii, September 16, 2013 Douglas Karr
Fiidiyowgaan waxaa ka Canbaare, yaa ku dhawaaqay a ku milmaan kafaala-qaadayaasheena Mindjet, ku samee qodobbo muhiim ah fiidiyowgan oo aan marnaba la iska indhatiri karin:
Hal-abuurnimo = Fikrad + Dil. Fikradaha kaligood ma ahan kuwo hal abuur leh, waa in lagu dhaqaaqo.
Fikradda ugu caansan had iyo jeer maahan fikradda ugu fiican ee natiijooyinka ganacsiga. Badanaa, waxaan daawan jirnay shirkado hoos u dhigaya arrin kasta oo macaamiil ah si aan u aragno ganacsigaas oo fashilmay Mararka qaarkood waxa macmiilku codsado uma qalmo dadaalka shirkaddaada ama wuxuu ka guuleystaa qiimaha qiimaha uu macaamilku siinayo. Macaamilku maahan had iyo jeer sax.
Spigit's Enterprise Innovation Platform waxaa adeegsada sumadaha adduunka ugu waaweyn si ay u soosaaraan badeecooyin iyo adeegyo cusub, u yareeyaan kharashyada una kordhiyaan hawlwadeennada iyo macaamilka. Kireynta ka faa'iideysiga dadka, ujeedada wada shaqeynta bulshada, makaanikada ciyaarta iyo xogta weyn Analytics, Spigit waxay ka caawisaa shirkadaha inay aqoonsadaan oo ay fuliyaan fikradaha isbeddelka ee ka yimaada shaqaalahooda iyo macaamiishooda miisaanka si loo wado natiijooyinka ganacsiga. In kabadan 3000 oo shirkadood, oo ay kujiraan shirkado caan ah guud ahaan Tafaariiqda, Daryeelka Caafimaadka, Dhaqaalaha, Teknolojiyada, Dowlada, Caymiska, Utiliyadaha iyo warshadaha dawooyinka waxay adeegsadaan Spigit si hal abuurnimo looga dhigo hadaf muhiim ah, soo noqnoqosho, lasaadaalin karo iyo geeddi-socod ganacsi oo la qiyaasi karo.
Canbaare waxay u oggolaaneysaa shirkadaha inay abaabulaan oo ay mudnaanta siiyaan fikradaha la isugu geeyay dad badan si loo gaaro:
Kobaca isbeddelka - Abuur durdurro dakhli oo hor leh, hagaajinta alaabada iyo adeegyada isla markaana ku kasbashada tartan adoo ka dhigaya hal-abuurnimo hawl muhiim u ah, habsami u socodka ganacsiga ee ururkaaga.
Wax ku oolnimada Qiimaha - Shaqaalahaagu way ogyihiin. Xal cusub u raadi dhibaatooyinka soo jireenka ah, yaree qarashka adigoo adeegsanaya habka hal-abuurka iyo toosinta shaqada.
Bulshada ROI - Hel natiijooyin la qiyaasi karo isla markaana u suurtageliya iskaashi ujeeddo leh oo lagu xallinayo caqabadaha ganacsiga dhabta ah ee waqtiga.
Isku mashquulka dadka - Dadkaagu way ogyihiin. Kordhi hawlgelinta shaqaalaha oo hel aragti macno leh oo macmiil ah.
Tags: dad badanfikradahafikirkahal-abuurnimoMindjetcawl
Planspot: Kor u qaad oo Iibso Dhacdooyinkaaga